မန္တလေးမြို့မှာ ယနေ့ညနေပိုင်းမှ ပြုလုပ်သော လျှပ်စစ်မီးပုံမှန်ရရှိရေး ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပွဲ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » မန္တလေးမြို့မှာ ယနေ့ညနေပိုင်းမှ ပြုလုပ်သော လျှပ်စစ်မီးပုံမှန်ရရှိရေး ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပွဲ…
မန္တလေးမြို့မှာ ယနေ့ညနေပိုင်းမှ ပြုလုပ်သော လျှပ်စစ်မီးပုံမှန်ရရှိရေး ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပွဲ…
Posted by ခေတ်သစ်ပေါက်ကျိုင်း on May 20, 2012 in Community & Society, Copy/Paste, Myanma News, News, Society & Lifestyle | 22 comments
မီး၊ရေ ပုံမှန်ရရှိရေးအတွက် ယနေ့ ညနေ(၇)နာရီခန့်မှာ မန္တလေးမြို့နေ ပြည်သူများက ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်နေစဉ်…
မန္တလေးပြည်သူများက မန္တလေးမြို့တိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ချီရေးရုံးသို့ စီတန်းလှည့်လည်ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်နေကြပါတယ်လို့သိရပါတယ်၊
ည၁၀နာရီထိုးတဲ့အထိ ၂၆လမ်း ၇၈လမ်းထောင့် လမ်းလယ် ပလက်ဖောင်းမှာ ရှိနေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ထူးခြားချက်အနေနဲ့ ဗင်ဖင်လုံး၂စီး ပေါ်ကနေ စောင့်ကြည့်သွားတဲ့ လူကြီးများကို သတိထားမိပါတယ်။ လျှပ်စစ်မီး ရှိမှု အနေအထား အမြန်ဆုံး တိုးတက်လာမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
ကိုပေါက်ရေ. ပုံတွေထဲမှာ ကိုပေါက်မတွေ့ ပါလား။ကိုပေ တော့မတွေ့ မိဘူးဗျို့ ။
အင်္ကျီချွတ်နဲ့ တစ်ယောက်က ဘယ်သူများပါလိမ့်။ဒီသတင်းကြားရတော့ စိတ်မ
ဇော်မင်း အနေနဲ့သိက္ခာ ပညာမရှိပဲ၊ပညာမတတ်ပဲ၊
သူထက် သိတဲ့ သူမရှိလို့ ပြောတာဟာ လုံးဝကျေနပ်စရာ မရှိပါဖူး။
ငတုံးဝန်ကြီးက ဘာမှမတတ်ပေမဲ့ ဌာနတွင်းက လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာပညာတတ်တွေ
ဌာနရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို အမြန်ဆုံးပြန်ဆယ်ကြပါ။
သမတကြီးက နိုင်ငံခြားက မြန်မာ ပညာရှင်တွေ ဖိတ်ခေါ်နေတာကောင်းပါတယ်။
ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးမှာ အညှိုးနဲ့အပယ်ခံထားရတဲ့
မြန်မာပညာရှင်တွေ အများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာလည်း မမေ့စေချင်ပါဖူး။
ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ခွင့်ရတဲ့အတွက် … ကျေးဇူးပါနော် … ။
မီးနဲ့ ရေ က … မြို့နေလူတန်းစားအတွက် … တကယ့်ကို မရှိမဖြစ်ပါပဲ … ။မြို့လည်ခေါင်မီးမလာဘူးဆို ရေပါမရတော့ဘူး … ရေမရတဲ့အခါ စမ်းချောင်းတွေ ၊ အင်းအိုင်တွေထဲ ဆင်းချိုးလို့ ရတာမျိုးလည်း မဟုတ်တော့ … မိသားစုများတဲ့ အိမ်ဆို .. အိမ်သာသုံးဖို့ ရေကအစ ဒုက္ခရောက်ကြရတယ် … ။ အဲ့ဒုက္ခက စိတ်ညစ်စရာကြီး … ။
ဒါနဲ့ ..ဒင်းတို့ကို ဆန္ဒပြဖို့အတွက် ဖယောင်းတိုင် တယောက်တတိုင်စီ ထွန်းလာရတာ နှမျောစရာ…
.. တစ်တိုင်ကို သုံးပိုင်းပိုင်းထွန်းပြီး လက်မပူအောင် အိမ်က ပုဂံပြားအသေးတစ်ချပ်ပေါ်တင်ထွန်းပြီး … သရော်သင့်တယ်…. ။
ခတ်မှီ ဖွင့်ဖြိုး တိုးတက်သော နိုင်သံတော်သစ်ဆီ … ဖယောင်းတိုင်ကိုင်ပြီး ချီတက် ဖို့များ စိတ်ကူးလေသလား သမ္မဒဂျီးရယ် .. အဟိ
ဇော်မင်းက ရှက်ကြော မရှိဘူးကွဲ့…
မွေးထဲက ချက်ကြော နဲ့ ရှက်ကြော မှားဖြတ်လာဒါ….
ဆီလို စန်ဒ ပြလယ်နော် ။။ ၀ အားကြီး ၀မ်းစာလယ် ။ ၀ေ၇အားနော် ပြန်လုပ်ခွင့် ၇မယ်။ ရှဲ ရှဲ ။ လောလောဆယ် ၀ စူငယ်ချင်း ဖရောင်းနော် ရောင်းကောင်းလယ်။
ပြည်သူတွေ မီးပျက်လို့ ဖယောင်းတိုင်ပဲ အားကိုးနေရတဲ့ အချိန်မှာ
ဖယောင်းတိုင်ထွန်းတာအစား နည်းလမ်းတစ်ခုခုတော့ ရွေးသင့်ပါတယ်။
ဆန္ဒပြ ဦးဆောင်သူတွေ စဉ်းစားပါ။
မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းက ဒီလျှပ်စစ်မီးကိစ္စကို ဦးဆောင်ပြီး
လျှပ်စစ် မီးအမြန်ရအောင် ပညာရှင်တွေ စုစည်းဆွေးနွေးဖို့ လိုနေပါပြီ။
ဝန်ထမ်းတွေက အညှိုးခံရမှာ စိုးလို့ ပါရဲမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဟိုးရှေးရှေးခေတ်တုံးကပေါ့ကွယ့် လူတွေဟာညအလင်းရောင်ရဖို့ ဆီမီးခွက်ကလေးတွေနဲ့ နေခဲ့ကြရတယ်တဲ့။အဲဒီနောက် လူသားတွေတီထွင်မှု့နဲ့ ဖယောင်းတုံးကြီးတွေကို အသုံးပြုမီးထွန်းခဲ့ကြပြန်တယ်၊ အဲဒီကနေ ဖယောင်းတိုင်ထုတ်လာကြပြီး ဖယောင်းတိုင်လေးတွေနဲ့ မီးထွန်းနေကြတယ်ကွယ် လို့သားကိုပုံပြောနေတုံး—သားကနားထောင်ရင်းကြားဖြတ်မေးလိုက်တယ်။ အဲဒါက
ဖေဖေ ဖယောင်းတိုင်းနဲ့မီးထွန်းကြတယ်ဆိုတော့ သားတို့အခုနေတဲ့ခေတ်ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်တဲ့။
အဲဒါသားကို မဟုတ်ဘူးအခုဖေဖေတို့၊သားတို့ရောက်နေတဲ့ခေတ်က ခေတ်မှီဖွံဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီခေတ်သားရယ် ဖယောင်းတိုင်းတွေထွန်းပြီးနေတဲ့ခေတ်က အတော်ကိုကြာခဲ့တဲ့ ခေတ်ပါသားရယ် လို့ရှင်းပြတာ၊ သားကဘယ်လိုမှလက်မခံဘူး၊ ဖေဖေညာတယ် ဖေဖေညာတယ်လို့ဘဲ နားပိတ်ပြီးအော်နေလေရဲ့။
အိမ်မှာကလည်း ညတိုင်း လျှပ်စစ်မီးမလာလို့ ဖယောင်းတိုင်းတွေထွန်းပြီး နေနေရတာက အတော်ကြာနေပြီလေ။
ကိုယ်လိုချင်တာကို ရဲရဲတောင်းဆိုတဲ့မန္တလေး သူ/သားတွေကိုလေးစားပါတယ်။ အောင်မြင်ပါစေဗျာ။
ယနေ့.. မန္တလေးမြို့မှာ ယနေ့ညနေပိုင်းမှ ပြုလုပ်သော လျှပ်စစ်မီးပုံမှန်ရရှိရေး ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပွဲ…
နောက်တပါတ်ကြာသော်… ရန်ကုန်မြို့မှာ ယနေ့ညနေပိုင်းမှ ပြုလုပ်သော လျှပ်စစ်မီးပုံမှန်ရရှိရေး ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပွဲ…
နောက်၂ပါတ်… မန္တလေးမြို့မှာ ယနေ့ညနေပိုင်းမှ ပြုလုပ်သော လျှပ်စစ်မီးပုံမှန်ရရှိရေး ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပွဲ…
နောက်၁လ… ရန်ကုန်မြို့မှာ ယနေ့ညနေပိုင်းမှ ပြုလုပ်သော လျှပ်စစ်မီးပုံမှန်ရရှိရေး ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပွဲ…
.. တနေ့သောအခါ… မန္တလေးမြို့သူားများနှင့်.. ရန်ကုန်မြို့သူားများ.. ????ပွဲ…။
ခုလိုမျိုး. မိမိဆန္ဒကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာကြတာကို
ကြိုဆိုပါကြောင်း နှင့် အများပြည်သူတို့ ၏လိုအပ်ချက်များ အမြန်ဆုံး
တောင်းသာတောင်းတယ် ဘယ်တော့မှမရဘူးဖြစ်မှာကိုလဲ စိုးရိမ်မိပါ၏။
နယ်မြို့နယ်လေးတွေမှာပါ လျှပ်စစ်မီးပုံမှန်ရရှိရန်အတွက် ထပ်မံပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်း။
လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဆိုတာ တစ်ယောက်တည်းပါ ငါ့တို့က အများကြီး အများနဲ့တစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်ကနိုင်တာ ဘယ်မှာရှိဖူးလို့လဲ မှန်မယ်ထင်ရင် ဘယ်တော့မှ နောက်မဆုတ်ဘူးကွ
သင့်မြတ်လျော်ကန်တဲ့ လမ်းပါ… လူကြံရင် ပန်းကန်တောင် ဇွန်းဖြစ်သတဲ့…
ကြည့်ရတာ အားရလိုက်တာ… အောင်မြင်ပါစေ…
အောင်မြင်သွားတယ်လို့ လဲ ကြားမိပါတယ်…။
21.5.2012 တနင်္လာညနေ ၇ နာရီခန့် အချိန်မှာ ၂၆ လမ်း ဆွမ်းဟော်တယ် ရှေ့ မှာ ဆက်လက် ဆန္ဒပြနေတာ ကို တွေ့ ခဲ့ရပါတယ် ။ မိုးလေးက ဖွဲဖွဲ ရွာနေပါတယ် ။
ကိုပေရေ. တချိန်က အဲဒီဆွမ်းဟော်တယ်က မမစန္ဒာကိုတောင် သွားသတိရမိတယ်။
မဆီမဆိုင်။ကျနော်တို့ ဆီက မီတာခတွေလျှော့ပေးဖို့ တောင်းဆိုရမယ်ဗျာ။တစ်ယူနစ်
(၄၈၀)ကျပ်ပေးနေရတဲ့ ကျနော်တို့ မြို့ သူားတွေ အဖြစ်ကို ကြည့်လှည့်ပါအုံး။